Ny asa fampielezam-boky
“Ary nisy nilaza tamiko hoe: tsy maintsy maminany indray hianao ny amin’ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro “Apok. 10:11
Naorina teo ambany fitarihan’Andriamanitra sy ny fanaraha-masony manokana ny asa-fampielezam-bokintsika. Natokana hanatratra tanjona manokana izany. Nofidin’Andriamanitra ny advantsitsa mitandrina ny andro fahafito mba ho vahoaka manokana, tafasaraka amin’izao tontolo izao. Tamin’ny antsiben’ny fahamarinana no nanapahany azy ireo hiala tsy ho tonga hazan’izao tontolo izao sy nitondrany azy hanana fifandraisana Aminy. Nanao azy ireo ho solontenany Izy, ary niantso azy ireo ho ambasadaoro haneho Azy eo amin’ilay asam-pamonjena farany. Ny haren’ny fahamarinana lehibe indrindra izay tsy mbola nankinina tamin’olombelona mety maty, ireo fampitandremana masina sy mahatahotra indrindra tsy mbola nalefan’andriamanitra tamin’ny olona, dia nankinina tamin’izy ireo mba hoentiny eo amin’izao tontolo izao; ary eo am-panatontosana izany asa izany, dia ho tonga isan’ireo fiasana mahomby indrindra ireo trano fampielezam-bokintsika. Ireny toeram-piasana ireny dia tokony hijoro amin’ny mahavavolombelon’Andriamanitra azy, mampianatra ny fahamarinana amin’ny olona rehetra. Avy amin’izy ireny no tokony hivoahan’ny fahamarinana tahaka ny jiro mirehitra. Toy ny hazavana lehibe eny aminn’y toerana misy fanilo lehibe manazava eny amoron-dranomasina mampidi-doza eny, dia tokony handefa ihany koa ny tara-pahazavany tsy tapaka ao amin’ny haizin’izao tontolo izao ireny, ka hanaitra ny olona ny amin’ireo loza maro mananontanona azy miaraka aminn’y faharavana. Natao hanomana vahoaka hihaona amin’Andriamanitra ireny boky voatonta avy eny amin’ny trano fanontam-pirintsintsika ireny. Tokony hahavita ny asa eo amin’izao tontolo izao, sahala amin’ny asa izay nataon’i Jaona mpanao batisa ho an’ny firenena jiosy izy ireny. Tamin’ny alalan’ireo hafatra fampitandremana manaitra, no namohazan’ny mpaminanin’Andriamanitra olona avy tamin’ny faharendreman’izao tontolo izao. Tamin’ny alalany no niantsoan’Andriamanitra ny Isiraely nihemotra ho amin’ny fibebahana. Nampiharihary ireo hevi-diso maro fanta-daza tamin’ny fanehoana ny fahamarinana izy. Nanoloana ireo fampianaran-diso nisy tamin’ny androny fahiny, dia nijoro nandroso hatrany, toy ny fahazoana antoka ny mandrakizay, ny fahamarinana. Hoy ny hafatra nambaran’i Jaona: “Mibebaha hianareo; fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat. 3:2. Izany hafatra izany koa no mbola tokony homena izao tontolo izao ankehitriny, amin’ny alalan’ireo boky voatonta avy amin’ireo trano fanontam-piritintsika.